ငွေသွင်းငွေထုတ်ကုန်ကျစရိတ် - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
အဘို့အမွှမ်းတင်အားသာချက်များတစ်ခုမှာ Forexနှင့်မကြာခဏပွဲစားများသူတို့ကိုယ်သူတို့အသုံးပြုပုံလှည့်စားအကုန်သွယ် Forex နီးပါးကြောင်းစဉ်းစားသို့အများဆုံးလေ့လာသူကုန်သည်များဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်ကြေညာချက်မရှိ, ကော်မရှင်ရှိပါတယ်ကြောင်း အခမဲ့ တာဝန်ခံ၏။ သင်တစ်ဦး ECN (အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်ကို) (ကတင်းကျပ်တဲ့ပျံ့နှံ့လဲလှယ်အတွက်သေးငယ်တဲ့ကော်မရှင်အားသွင်းထားခြင်း) ကိုပွဲစားနှင့်အတူအရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေကြတယ်မဟုတ်လျှင်အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, အဘယ်သူမျှမကော်မရှင်ရှိပါတယ်။ သို့သော်ဤသူသည်သင်တို့အရောင်းအလုပ်ဆောင်သွားရန်နိုင်သည်ကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ အခမဲ့ တာဝန်ခံ၏။ အဘယ်သူမျှမရှိတယ် အခမဲ့ နေ့လယ်စာ။
ပွဲစားများန်၏ပုံစံအတွက်ပိုပြီးသိမ်မွေ့ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်အတွက်ကိုတည်ဆောက်လေပြီ, သူတို့ဆိုရင် ECN ကျနော်တို့မြင်ရကြလိမ့်မည်အဖြစ်ပွဲစားများ, သူတို့ကလည်း, ကော်မရှင်အားသွင်း။
တစ်ဦးကပြန့်နှံ့အကြားခြားနားချက်သည် “ တောင်း” နှင့် "လေလံ" တစ်ပွဲစားရဲ့ငွေကြေးကိုးကား၏စျေးနှုန်းတွေ။ ပြံ့နှံ့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ဦးအမိန့်ကွပ်မျက်များအတွက်အခကြေးငွေအဖြစ်ပွဲစားအားဖြင့်စုဆောင်းကောက်ယူကြပါတယ်။
ပျံ့နှံ့ = စျေးနှုန်းမေး - လေလံစျေးနှုန်း
ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ဦးတစ်ဦးလျှပ်တစ်ပြက်ကြည့်ရှုကြကုန်အံ့ MT4 သူတို့ရဲ့လေလံနှင့်အတူအပေါငျးတို့ငွေကြေးဖော်ပြပေးသောဈေးကွက်လက်ပတ်နာရီ (4 ဂဏန်းအကျိုးဆောင်), နှင့်စျေးနှုန်းများကိုမေး:
လေလံ / မေးပါ
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF 1.0536 / 1.05382pips သငျသညျ, 1.0538 မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ / CHF ကိုဝယ် 1.0536 မှာရောင်းချနှင့်2pips ပေးဆောင်နိုင်
EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.2923 / 1.2924 1 pips သငျသညျ, 1.2924 မှာ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ် 1.2923 မှာရောင်းချနှင့် 1 PIP ပေးဆောင်နိုင်
GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.5306 / 1.53082pips သငျသညျ, 1.5308 မှာ GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုဝယ် 1.5306 မှာရောင်းချနှင့်2pips ပေးဆောင်နိုင်
သင်ကဗိုလ်ကြီးအများစုကိုကျော်လွှားရန်တစ်ဦးငွေပေးငွေယူကြေး (သို့မဟုတ် Handicap) ၏တာမဟုတ်ပါဘူးအရာ 1-3 PIP ပြန့်ပွား, အကြားဖြစ်ကြောင်းကြည့်ပါ။ ဒီစုံတွဲတစ်အများကြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန် pair တစုံဟာချက်ချင်းအဘို့, ကုန်သွယ်မှုစေသည်ရာ - သင်အထက်ဇယားအောက်ခြေမှာငုံ့ကွညျ့ပါလျှင်သို့သော်, သင် EUR / AUD7pips တစ်ပြန့်ပွား (1.4839 = 1.4832 0.0007) ရှိကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည် ကုန်သွယ်ရေးကွပ်မျက်ခံရသည်, သငျသညျ -7 pips ချပါလိမ့်မယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့အစိုင်အခဲ Mitigation အကြောင်းပြချက်မရှိတယ်မဟုတ်လျှင်5ထက်နိမ့်တဲ့ပျံ့နှံ့ရှိသည်အားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်မှုချင်တယ်။
သင်တို့ကဲ့သို့တစ်ဦးကိုပြန်ဆက်ကပ်သောသူပွဲစားများမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်အတူတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ဖြစ်လျှင် http://www.CashBackForex.com, သငျသညျသိသိသာသာပြန့်ပွား-ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချမည်ဖြစ်ကြောင်းသောကုန်သွယ်မှု, ပြန်သင့်အကောင့်မှပြန့်ပွားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကဝင်ငွေလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့အဆုံးစွန်ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ဖော်မြူလာ (Cashbackforex နှင့်အတူစာရင်းအားလုံးပွဲစားများအတွက်) ဤကဲ့သို့သောကြည့်ရှုမယ်လို့:
ငွေသွင်းငွေထုတ်ကုန်ကျစရိတ် = (Spread + ကော်မရှင်) - Cashback Forex ပြန်ပေးငွေ
လွယ်ကူစွာ, Track View ထိုအပြံ့နှံ့နှိုငျးယှဉျဖို့ Tools များနှင့် Website များ
ရှိပါတယ် MT4 အလွယ်တကူကဇယားရဲ့ငွေကြေးတစ်စုံရဲ့ Real-time နှင့်တစ်ခါတစ်ရံသမိုင်းဆိုင်ရာန့်ပြသနေတဲ့ငွေကြေးဇယားအပေါ်ဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်ရှိညွှန်ပြချက် tools တွေကိုထုတ်။
StatMonitor_1.1Phat-.mq4 displays, ဝယ် / ရောင်းလဲလှယ်ရေး, ဇယားသင်္ကေတ၏ Volume ကိုပျံ့နှံ့။
FXRM Spread History.ex4 လက်ရှိပြန့်ပွား, max ကိုပြန့်ပွားခြင်းနှင့်မြေကွက်သမိုင်းပြန့်နှံ့ခြေရာခံ။
multi Pair ကို Monitor.mq4 ပျံ့နှံ့ မျိုးစုံအားလုံး၏လက်ရှိန့်ခြေရာခံ။
Track ထိုအခါပွဲစားပြံ့နှံ့နှိုငျးယှဉျဒါက Website များ
http://www.fxintel.com/live/ 28 ပွဲစားများ။ တိုက်ရိုက်ပြန့်ပွားဒိုင်ခွက်။ ဘေးထွက် tools တွေကို: တစ်) ကိုရွေးချယ်ပွဲစားများအဘို့အပြန့်နှံ့နောက်ဆုံး 12 နာရီ / ရက်ပတ်လုံး AVG; ခ) အကောင်းဆုံး4ပျံ့နှံ့ပွဲစားများ။
http://www.mt4spreads.com/ 23 ပွဲစားများ။ တိုက်ရိုက်ပြန့်ပွားဒိုင်ခွက်။ ပျမ်းမျှအားပြန့်ပွားသမိုင်း (ကောင်းတဲ့!): အားလုံးသို့ဆင်းတူး။ ဘေးထွက် tools တွေကို: session တစ်ခုသို့မဟုတ်အချိန်ဘောင်များအတွက်အကောင်းဆုံးပြန့်ပွားရှာပါ။
http://www.mt4i.com/spread/symbol.aspx 21 ပွဲစားများ။ သင်္ကေတများမြင်ကွင်း - ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပွဲစားများအကြားသီးခြားသတင်းအချက်အလက်ပျံ့နှံ့မှု (min, avg, max - ခြုံငုံမှုနှင့် session တစ်ခုစီ) ။
ပွဲစားကြည့်ရန်: ပွဲစားကြည့်ရန်: ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအားလုံးအားလုံးအတွက်ရွေးချယ်ထားသည့်ပွဲစားများကိုသတင်းပို့ခြင်း (min, avg, max - ခြုံငုံမှုနှင့် session တစ်ခုစီ) ။
http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads 65 + ပွဲစားများ။ တိုက်ရိုက်ပြန့်ပွားဒိုင်ခွက်။ session ကိုပျမ်းမျှနှင့်အပြောင်းအလဲများကို (! ကောင်းတဲ့), နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်န့်နှင့်အတူပွဲစားများနှင့်အတူပျမ်းမျှအားပြန့်ပွားသမိုင်း (ကောင်းတဲ့!): အားလုံးသို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆင်းတူး (ကောင်းတဲ့!) ။ အကောင်းဆုံး: နက်ရှိုင်းနှင့်ပိုပြီးအမြင်အာရုံနှစ်သက်ဖွယ်လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်ပိုမိုပွဲစားများ။
ဒါဟာကုန်သွယ်၏ပြန့်ပွားငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ကြောင်းသတိပြုရပါမည် Forex မကြာခဏကုန်သွယ်နှင့်အတူတက် mount, ဒါကြောင့်သင့် system မကြာခဏကုန်သွယ်တောင်းဆိုလျှင်, သင်က, ဤအရောင်းအဝယ်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကျော်လွှားနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်သေချာစေချင်နိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးထင်ရသောကောင်းသောစနစ်များသို့ပြန့်နှံ့ကုန်ကျစရိတ်အတွက် factoring လျင်မြန်စွာကျရှုံးဖြစ်ဖို့သူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာထို MT4 ကိုခေါ် backtesting အစီအစဉ် ( မဟာဗျူဟာစမ်းသပ်သူ) ပြီးသားပြန့်ပွားကုန်ကျစရိတ် (သို့မဟုတ် backtesting ၏ယခုအချိန်တွင်အနည်းဆုံးပျံ့နှံ့) ထုတ်အကြောင်းခံအချက်များ, ဤပြန့်ပွား factoring အင်္ဂါရပ်ကရှာဖွေနေအောင်မြင်တဲ့ဖန်တီးရန်ဒါခက်ခဲသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးပါသည့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် MT4 backtesting အတွက် EA ၏, ရှေ့ဆက်စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်တယောက်တည်းကြကုန်အံ့။ ထိုအခါသင်၏ system တစ်ခုရှိလျှင် ဉီးခေါင်းရေ သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အလွန်တင်းကျပ်စွာန့်ပေါ်တွင်မူတည်သည်ဟုစနစ်ပွဲစားသောသူတို့အားအစည်းအဝေးများကာလအတွင်းကဤန့်အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်လျှင်, တကပျက်ကွက်ဖြစ်လိမ့်မည် ဉီးခေါင်းရေ စနစ်ကအမြတ်ထုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်အတွက်ဖြစ်ရပ်မှန်: အများအပြားအာရှရှိခဲ့ ဉီးခေါင်းရေ ကွက်အထိအားလုံး (EURCHF, EURGBP) အပေါ် 2009-2010 ဖန်တီးဒါပေမဲ့န်အစည်းအဝေး၌စဉ်အတွင်းအဲဒီနှစျခုစွမ်းအပေါ်နှစ်ဆတက်လာသောအခါအများစုမအောင်မြင်ဘူး။
ဒါဟာ Fixed ဒါမှမဟုတ် Variable ပြံ့နှံ့မှုနှင့်အတူတစ်ဦး Forex ပွဲစားနှင့်ကုန်သွယ်ရေးရန် သာ. ကောင်း၏လား?
အဲဒီမှာ fixed ပျံ့နှံ့ပွဲစားများများစွာထွက်ရှိနေပါတယ်, ငါ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ် 1 PIP သကဲ့သို့အနိမ့်သတ်မှတ်ထားတဲ့ပြန့်ပွားနှင့်အတူအနည်းငယ်မြင်ကြပြီ။ ဒီ setup ကို၏အားသာချက်သိသာသည်: ကုန်သည်များသူတို့ပင်ဤကဲ့သို့သော variable ကိုပြန့်ပွားပွဲစားမတည်ငြိမ်မှုအန္တရာယ် offset မှပြန့်ပွားတိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, ဘယ်မှာတစ်ခုမြင့်မားတဲ့သက်ရောက်မှုသတင်းဖြစ်ရပ်, စဉ်အတွင်းအဖြစ်စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှု၏ကြိမ်ကာလအတွင်းလုံးကိုအချိန်သတ်မှတ်အနိမ့်ပြန့်နှံ့ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကိုခံစားမိ ။ ကုန်သည်ကြီးများပင် variable ကိုပြန့်ပွားပွဲစားများပုံမှန်အားဖြင့်အဆိုပါငွေဖြစ်လွယ်အန္တရာယ် offset မှပြန့်ပွားတိုးမြှင့်ဘယ်မှာထိုကဲ့သို့အာရှ session တစ်ခုအဖြစ်အနိမ့်ငွေဖြစ်လွယ်ကာလ, စဉ်အတွင်း fixed အနိမ့်ပြန့်နှံ့ရပေမည်။ သို့သော်အချို့ပုံသေပျံ့နှံ့ပွဲစားများ (သူတို့တစ်နေ့တာအတွင်း EUR / CHF အပေါ်2pips လျှင်, သူတို့ကညဉ့်နေစဉ်အတွင်း4သို့မဟုတ်5pips ဖြစ်ကြသည်ဥပမာ) ထိုသို့သောအာရှ session တစ်ခုအတွင်းမှာအဖြစ်တိတ်ဆိတ်ကာလအတွင်းမှာပိုမိုကျယ်ပြန်န့်ကိုကိုးကားကြလိမ့်မည်, စတဲ့သတင်းစဉ်အတွင်း ကြေညာချက်များ။ fixed ပွဲစားများညဥ့်သို့မဟုတ်သတင်းစဉ်အတွင်းပြန့်ပွားကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်မိမိတို့ website တွင်အကြောင်းသတိပေးပါလိမ့်မယ်။ ဈေးကွက်ထဲမှာတိုင်းအလေးအနက် shakeout: သတင်းတစ်ပွဲစားတစ်ဦးပျံ့နှံ့ယျြဝနျးဘယ်တော့မှကတိပြုမဟုတ်လျှင်, စီးပွားရေးဆိုင်းသို့မဟုတ်အခြားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များချက်ချင်း, fixed န့်တိုးချဲ့ဖို့ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျ fixed ပျံ့နှံ့ပွဲစားများအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်ကအတူရိုက်ထည့်မီ, ပြန့်ပွားရေးမူဝါဒစစ်ဆေးပါ။
မကြာသေးမီကအမျိုးမျိုးသောပွဲစားပြန့်ပွားမှုများတိုးပွားလာခဲ့သည်။ အမျိုးမျိုးသောပြန့်ပွားအကုန်အကျနိုင်ပါတယ်။ စျေးကွက်မတည်ငြိမ်မှုနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုပေါ် မူတည်၍ အမျိုးမျိုးကွဲပြားနိုင်သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောမတည်ငြိမ်မှု - မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှု, နိမ့်မတည်ငြိမ်မှု - နိမ့်ပျံ့နှံ့။ ထိုနေ့၏ပုံမှန်သင်တန်းကာလအတွင်းငွေကြေးစုံတွဲသည်ပုံမှန်မတည်ငြိမ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးပြန့်ပွားမှုသည်ပုံသေဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်သတင်းများသို့မဟုတ်ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအဖြစ်အပျက်များကြောင့်မတည်ငြိမ်မှုတိုးပွားလာသည့်အခါ2pip spreads မှ 4-6 သို့ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ သတင်းဖြစ်ရပ်သည်အင်အားကြီးမားပါက pip spread သို့မဟုတ် 20 pip ပင်ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်: ပိုမိုမြင့်မားငွေဖြစ်လွယ် - နိမ့်ပျံ့နှံ့နိမ့်ငွေဖြစ်လွယ် - ပိုမိုမြင့်မားပျံ့နှံ့။ EUR / USD သည်အနိမ့်ပျံ့နှံ့မှု (တစ်ခါတစ်ရံ 1.5 ပျံ့နှံ့မှုနှုန်း) ရှိသည့်ပိုမိုမြင့်မားသောငွေထုတ်ချေးနှုန်း၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ EUR / AUD သည်အနိမ့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့်မြင့်မားသောပျံ့နှံ့မှုရှိသည့်ငွေကြေးအတွဲ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် (15 pip ပျံ့နှံ့မှုမကြာခဏ) ။
ကုန်သည်များအနေဖြင့်ကုန်သွယ်ရေးသမားများအားဤကဲ့သို့စျေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချရန်ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် (ဥပမာ - GBP / USD 1 pip ကဲ့သို့နိမ့်သည်) ပျံ့နှံ့သွားသောအနိမ့်အမြင့် (ဥပမာ GBP / USD) သည်အနိမ့်အမြင့်ပျံ့နှံ့သောငါးစာကိုသတိထားပါ။ ဤ“ နိမ့်ကျသကဲ့သို့” ပြန့်ပွားမှုများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နိမ့်ကျနေသော်လည်း၎င်းတို့သည် 24 နာရီအတွင်းစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပျက်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်ဤအရောင်းအ ၀ ယ်များနှင့်အဆုံးသတ်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြန့်ပွားမှု“ နိမ့်ကျသည်” ကိုကြည့်မည့်အစား“ ပုံမှန်” ပြန့်နှံ့သောစာဖတ်ခြင်း၊ “ ပုံမှန်” ပြန့်နှံ့သောစာဖတ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သင့်သော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံပုံမှန်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်မရေရာနိုင်ပါ။
ပိုကောင်းသေး, ပျမ်းမျှပျံ့နှံ့ရဖို့ကြိုးစားပါ။ ထိုသို့ကုန်သွယ်နေ့ကတလျှောက်လုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့တိုင်း PIP ပွောငျးခွငျးကြာသောကွောငျ့ကအများကြီးမျှတတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အနည်းငယ်ပွဲစားများပျမ်းမျှအားပြန့်ပွားစျေးနှုန်းဖော်ပြရန်, ဒါကြောင့်အထက် posted ကိရိယာနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အတူပျမ်းမျှပျံ့နှံ့ကြံစည်ဖို့ကောင်းတယ်။
အဆိုပါ Spread လျှော့ချပြီးတော့ကော်မရှင် Add ဒါက ECN Providers
ကိုခေါ်တချို့ကပွဲစားများ, ECN ပွဲစားများ (အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်) သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်အနည်းငယ်မှအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကျဆင်းမှုများကိုစုဆောင်းပြီးအကောင်းဆုံးလေလံသို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုပြရန်ကြိုးစားသည်။ သူတို့ဖောက်သည်များသည်ဘဏ်၏ဈေးနှုန်းနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာစျေးနှုန်းများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်ရန်ကုန်ကြမ်းပြန့်ပွားမှုကိုအမှတ်အသားပြုမည့်အစားကော်မရှင်တခုခုကိုသူတို့ကောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်တစ် ဦး နှင့်အတူကုန်သွယ်၏အဓိကအားသာချက် ECN ပွဲစားအသိသာပျံ့နှံ့ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖမ်း (အောက်တွင်မှတ်သားကြည့်ပါ) လည်းရှိ၏။
မှတ်စု: နှင့် ECN ပြန့်ပွား + ကော်မရှင်ပုံမှန်စျေးကွက်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကိုပွဲစားသို့မဟုတ်အများအပြားလမျးဖွောငျ့ထုတ်ယူခြင်းမှတဆင့် (STP) ပွဲစားများ၏ပျံ့နှံ့ဘာထက်နိမ့်ဖြစ်စေခြင်းငှါသော်လည်းပွဲစားတဦးတည်း, ကော်မရှင်အပြင်ပြန့်ပွားကုန်ကျစရိတ်အတွက်ဆခွဲကိန်းရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်တစ်စက္ကန့်အားသာချက်ရှိပါတယ်။ မတည်ငြိမ်သောကြိမ် (သို့မဟုတ်အနိမ့်ငွေဖြစ်လွယ်ကာလ) တစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦး ECN Forex ပွဲစားအစားအန္တရာယ် offset တစ်ခုပြန့်ပွားတက် marking ၏, ရယူနိုင်သောအလွန်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။
အတူအားနည်းချက် ECN ပွဲစားများကသင်တကယ်တော့သင်ကတူညီတဲ့သို့မဟုတ်အခြားပွဲစားများထက်ပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါတဲ့အခါအနိမ့်ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်များတဲ့အတှေးအချေါသို့လှည့်ဖြားနိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြန့်ပွားမှာကိုကြည့်ဖို့လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့ကြပြီးကတည်းကကျနော်တို့နှင့်အတူသွားကြဖို့စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံစေခြင်းငှါ ECN အနိမ့်ဆုံးပျံ့နှံ့အတူပွဲစား။ သို့သော်တစ်ဦးချင်းစီကုန်သွယ်ရေးမှဆက်ပြောသည်ကော်မရှင်ကကုန်ကျစရိတ်တစ်ဦးကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် ECN အများကြီးလျော့နည်းဆွဲဆောင်မှုကော်မရှင်မပါဘဲအနိမ့်ပျံ့နှံ့ရှိသည်သောပိုပြီးယှဉ်ပြိုင် STP ပွဲစားအချို့ကိုထက်ပွဲစား။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်ထားတဲ့မြင်စေခြင်းငှါ, ECN ထို့နောက်သင်တစ်ဦး 1 PIP ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်တဲ့ပွဲစားနှင့်အတူအကျိုးသက်ရောက်မှုကုန်သွယ်၌ရှိကြ၏, ပွဲစား EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ် 1 တစ်ပြန့်ပွားရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်း 10,000 တွေအများကြီးနှုန်း $2တစ်ကော်မရှင်ကထည့်သွင်းအခါ။
သငျသညျအကောင်းတစ်ဦးကိုရှာဖွေလျှင်ကြောင့်ဤသို့အလွန်အရေးကြီးသည် ECN ပွဲစားပျမ်းမျှပျံ့နှံ့နှင့်ကော်မရှင်ကုန်ကျစရိတ်နှစ်ခုလုံးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, သူတို့တက် add ဖို့။ တခါတရံရှာဖွေရေးပယ်ပေးဆောင်နိုင်သည်အချို့သောကောင်းသောရှိပါတယ် ECN တကယ်တော့ကျင့်သောအထဲကရှိပွဲစားများ Forex စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ် (ပြန့်ပွား + ကော်မရှင်) ရှိသည်။
ငွေသွင်းငွေထုတ်ကုန်ကျစရိတ် = Spread + ကော်မရှင်
ဒါကြောင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့သို့မဟုတ် variable ကိုန့်နှင့်အတူ Forex ပွဲစားနှင့်အတူကုန်သွယ်မှု သာ. ကောင်း၏
အလွယ်တကူ Track View နှင့်ပြံ့နှံ့နှိုငျးယှဉျဖို့ Tools များနှင့် Website များ